လူတစ်ချို့ရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက် မှုကြောင့် ကြိုးစားလို့ရခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီ အကြောင်းကို ပြောပြလာတဲ့ ထွန်းထွန်း – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ထွန်းထွန်း ကတော့ အဆိုတော် တစ်ယောက်အနေနဲ့ စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကြိုးစား အားထုတ်မှု တွေကြောင့် သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ယခုမှာတော့ ထွန်းထွန်းက အနုပညာ လောကမှာ အခက်အခဲ တွေကြားထဲကနေ လျှောက်လှမ်း လာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ရေးသားဖော်ပြလာ ခဲ့ပါတယ်။”မိတ်ဆွေတို့ရေ….ကျွန်တော် ထွန်းထွန်း အသက် ၁၆-၁၇ ကတည်းက EXAMPLEZ မှာ သီချင်းတွေဆိုခဲ့ သီချင်းရေးခဲ့တယ်……၂၀၀၀-၂၀၀၁ ပေါ့. အခုဆို ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီ အနုပညာလောကထဲမှာ အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျ ပုံစံမျိုးစုံ ဘဝမျိူးစုံနဲ့ အနှစ်၂၀ ကျင်လည်ခဲ့တယ်…..
အားပေး ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ် တွေကြောင့်သာ ကျွန်တော် ရပ်တည် နေနိုင်တာဖြစ်သလို… ကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်မှု ရှိပေးကြတဲ့ Production တွေ Producer တွေနဲ့ အမြဲတမ်း ကူညီ စောင့်ရှောက်ပေးကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တွေကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်…..ရုပ်ရှင်လောကထဲစဝင် ဦးကျော်ဟိန်းဆီရောက် တော့လည်း တချို့တွေက “သီချင်းပဲဆိုစမ်းပါ လိုင်းကြောင်ပြန်ပီ” ဆိုတာ မကြားတကြား ပြောတာတွေ, နာမည် တပ် ဒဲ့ စော်ကားခံရတာတွေကြားထဲကနေ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ကြိုးစားလေ့လာခဲ့ရတယ်. (ခုထိသင်ယူကြိုးစားနေဆဲပါပဲ) ခင်ဗျားတို့အထင်မကြီးတဲ့ Rap ဆိုတဲ့ ချာတိတ်တကောင် အနေနဲ့ ပထမဆုံး အကယ်ဒမီ ရတဲ့သူဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားခဲ့တယ် ကြိုးစားခဲ့တယ်…ရခဲ့တယ်……ဒါကလည်း ကျွန်တော်တယောက်တည်းတော်နေ တတ်နေလို့ လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ်ပါဘူး ဆရာကောင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကောင်း Team Work ကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်တော်က မြှောက်စားခြင်းခံခဲ့ရတာပါ……..
မိတ်ဆွေတို့ရေ ….ဘဝရဲ့မှတ်တိုင် တွေမှာ အမြဲတမ်း အနားမှာရှိ နေပေးနိုင်တာ မိသားစုပါ အခုဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို နှင်းဆီ(အငြိမ့်) မိသားစုရဲ့သား,တစ်ယောက်လို့ မြင်နေ ပေးကြပါပြီ. နှင်းဆီအဖွဲ့က ကျွန်တော့်အတွက် မိသားစုကြီးဆိုရင် EXAMPLEZ ကကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံး မိသားစုလေးပါပဲ ဒီကောင်တွေ နဲ့ အတူတူ လူလားမြှောက်လာကြတယ် ဝါသနာကို အရင်းတည်ပြီး ဖြစ်ချင်တာ တွေကို လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ ရန်ဖြစ်တယ်၊စကားများတယ်၊ ပြန်ခေါ်တယ်၊ ထပ်ကောက်တယ်၊ ပြသနာတွေ တူတူဖြေရှုင်းကြတယ်၊ ခရီးတွေ အများကြီးတူတူ ထွက်ခဲ့ကြတယ်၊ ဖေးမခဲ့ကြတယ်၊ မိတ်ဆွေတို့ရေ ….EXAMPLEZ ကို ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အခုဆိုအနှစ်၂၀Examplez 20YearsOfExamplez_Music_live ပွဲကြီးကို ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းစီစဉ်ခဲ့နိုင်ပါပြီ
လာမယ့် December ၄ ရက်နေ့ ည ၇နာရီမှာ ကျွန်တော်တို့တွေ သီချင်းတွေ ဆိုပြပါမယ်.. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပရိသတ်တွေ မသိသေးတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှိး ပြောပြချင်ပါတယ်…..ဒါကြောင့် EXAMPLEZ ပရိသတ်တွေ အချိန်လေးပေးပြီး ကြည့်ဖို့ လေးနက်စွာ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်. ….လာရောက်စိတ် အမောတချို့ ဖြေဖျောက်ကြပါဗျာ.”ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။
လူတဈခြို့ရဲ့ ဝဖေနျတိုကျခိုကျ မှုကွောငျ့ ကွိုးစားလို့ရခဲ့တဲ့ အကယျဒမီ အကွောငျးကို ပွောပွလာတဲ့ ထှနျးထှနျး
ပရိသတျကွီးရေ ထှနျးထှနျး ကတော့ အဆိုတျော တဈယောကျအနနေဲ့ စတငျခဲ့ပွီး နောကျပိုငျးမှာ ကွိုးစား အားထုတျမှု တှကွေောငျ့ သရုပျဆောငျကောငျး တဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ယခုမှာတော့ ထှနျးထှနျးက အနုပညာ လောကမှာ အခကျအခဲ တှကွေားထဲကနေ လြှောကျလှမျး လာခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို ရေးသားဖျောပွလာ ခဲ့ပါတယျ။”မိတျဆှတေို့ရေ….ကြှနျတျော ထှနျးထှနျး အသကျ ၁၆-၁၇ ကတညျးက EXAMPLEZ မှာ သီခငျြးတှဆေိုခဲ့ သီခငျြးရေးခဲ့တယျ……၂၀၀၀-၂၀၀၁ ပေါ့. အခုဆို ဘာလိုလိုနဲ့ ဒီ အနုပညာလောကထဲမှာ အနိမျ့အမွငျ့အတကျအကြ ပုံစံမြိုးစုံ ဘဝမြိူးစုံနဲ့ အနှဈ၂၀ ကငျြလညျခဲ့တယျ…..
အားပေး ခဈြခငျကွတဲ့ ပရိသတျ တှကွေောငျ့သာ ကြှနျတျော ရပျတညျ နနေိုငျတာဖွဈသလို… ကြှနျတေျာ့ကို ယုံကွညျမှု ရှိပေးကွတဲ့ Production တှေ Producer တှနေဲ့ အမွဲတမျး ကူညီ စောငျ့ရှောကျပေးကွတဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျ တှကွေောငျ့လညျးဖွဈပါတယျ…..ရုပျရှငျလောကထဲစဝငျ ဦးကြျောဟိနျးဆီရောကျ တော့လညျး တခြို့တှကေ “သီခငျြးပဲဆိုစမျးပါ လိုငျးကွောငျပွနျပီ” ဆိုတာ မကွားတကွား ပွောတာတှေ, နာမညျ တပျ ဒဲ့ စျောကားခံရတာတှကွေားထဲကနေ စိတျပိုငျးဖွတျပွီး ကွိုးစားလလေ့ာခဲ့ရတယျ. (ခုထိသငျယူကွိုးစားနဆေဲပါပဲ) ခငျဗြားတို့အထငျမကွီးတဲ့ Rap ဆိုတဲ့ ခြာတိတျတကောငျ အနနေဲ့ ပထမဆုံး အကယျဒမီ ရတဲ့သူဖွဈလာဖို့ ရညျမှနျးခကျြထားခဲ့တယျ ကွိုးစားခဲ့တယျ…ရခဲ့တယျ……ဒါကလညျး ကြှနျတျောတယောကျတညျးတျောနေ တတျနလေို့ လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတျပါဘူး ဆရာကောငျး လုပျဖျောကိုငျဖကျကောငျး Team Work ကောငျးလှနျးလို့ ကြှနျတျောက မွှောကျစားခွငျးခံခဲ့ရတာပါ……..
မိတျဆှတေို့ရေ ….ဘဝရဲ့မှတျတိုငျ တှမှော အမွဲတမျး အနားမှာရှိ နပေေးနိုငျတာ မိသားစုပါ အခုဆိုရငျ ကြှနျတေျာ့ကို နှငျးဆီ(အငွိမျ့) မိသားစုရဲ့သား,တဈယောကျလို့ မွငျနေ ပေးကွပါပွီ. နှငျးဆီအဖှဲ့က ကြှနျတေျာ့အတှကျ မိသားစုကွီးဆိုရငျ EXAMPLEZ ကကြှနျတေျာ့ရဲ့ပထမဆုံး မိသားစုလေးပါပဲ ဒီကောငျတှေ နဲ့ အတူတူ လူလားမွှောကျလာကွတယျ ဝါသနာကို အရငျးတညျပွီး ဖွဈခငျြတာ တှကေို လုပျခဲ့ကွတယျ၊ ရနျဖွဈတယျ၊စကားမြားတယျ၊ ပွနျချေါတယျ၊ ထပျကောကျတယျ၊ ပွသနာတှေ တူတူဖွရှေုငျးကွတယျ၊ ခရီးတှေ အမြားကွီးတူတူ ထှကျခဲ့ကွတယျ၊ ဖေးမခဲ့ကွတယျ၊ မိတျဆှတေို့ရေ ….EXAMPLEZ ကို ခဈြတဲ့ ပရိတျသတျတှအေတှကျ အခုဆိုအနှဈ၂၀Examplez 20YearsOfExamplez_Music_live ပှဲကွီးကို ရညျမှနျးထားတဲ့အတိုငျးစီစဉျခဲ့နိုငျပါပွီ
လာမယျ့ December ၄ ရကျနေ့ ည ရနာရီမှာ ကြှနျတျောတို့တှေ သီခငျြးတှေ ဆိုပွပါမယျ.. ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပရိသတျတှေ မသိသေးတဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို ရငျးရငျးနှီးနှိး ပွောပွခငျြပါတယျ…..ဒါကွောငျ့ EXAMPLEZ ပရိသတျတှေ အခြိနျလေးပေးပွီး ကွညျ့ဖို့ လေးနကျစှာ ဖိတျချေါပါတယျ. ….လာရောကျစိတျ အမောတခြို့ ဖွဖြေောကျကွပါဗြာ.”ဆိုပွီး ရေးသားထားပါတယျ။